Siem Reap cambodia - toerana, hotely, toetrandro, seranam-piaramanidina, zavatra tokony hatao
Siem Reap no renivohitra ao amin'ny faritanin'i Siem Reap ao amin'ny avaratra andrefan'i Kambodza. Izy ity dia tanàna malaza fivarotana ary vavahady mankany amin'ny faritra Angkor.
Ny Siem Reap ankehitriny dia toerana fivarinan'ny mpizahatany malaza dia manana trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, ary orinasa maro mifandraika amin'ny fizahan-tany. Be dia be ny halehiben'ny tempolin'i Angkor, ilay mpizaha tany malaza indrindra any Kambodza.
Aiza i Siem Reap?
Siem Reap, tamin'ny fomba ofisialy ny Siemreap dia faritany ao Kambodza, any avaratra andrefan'i Kambodza. Izy io dia mifanolotra amin'ny faritanin'i Oddar Meanchey avaratra, Preah Vihear sy Kampong Thom any atsinanana, Battambang any atsimo ary Banteay Meanchey eo andrefana. Ny renivohitra sy ny tanàna lehibe indrindra dia ny Siem Reap. Io no toeram-pizahan-tany lehibe any Kambodza, satria izy no tanàna akaiky indrindra amin'ny tempolin'i Angkor malaza eran-tany
Fa maninona no mitsidika an'i Siem Reap?
Ho an'ny zava-maitso, ny fomba fiaina sy ny kolontsaina. Fa ny tena antony hahatongavany ho any Siem Reap dia ny fitsidihana ireo tempoly mahafinaritra an'i Angkor Wat, tsangambato ara-pivavahana lehibe indrindra eto an-tany, amin'ny tranokala misy 162.6 ha. Namboarina ho toy ny tempolin-trano Hindou natokana ho an'ny andriamanitra Vishnu ho an'ny fanjakana Khmer, niova tsikelikely izy io ary niova ho tempolista bodista hatramin'ny faran'ny taonjato 12.
Azo antoka ve ny Siem Reap?
Ny Siem Reap dia angamba ny toerana azo antoka indrindra any Kambodza. Lasa toerana filomanosana mpizahatany ary manaraka izany. Na dia kely aza ny heloka bevava indrisy dia tsy fahita am-pahavoazana, raha toa ka misy mieritreritra ny momba azy ireo dia azo antoka.
Hafiriana ny hijanonana ao Siem Reap?
Siem Reap dia tsy azo rakofana ao anatin'ny iray andro. Mila telo na efatra andro farafahakeliny ianao handrakofana ny haben'ny tempolin'i Angkor sy ireo zavatra manintona hafa ao amin'ilay faritra.
Rahoviana ianao no mitsidika an'i Siem Reap?
Ireo mpandraharaha fitetezana hafanam-po dia hilaza aminao fa tsy misy fotoana ratsy handalovana an'i Siem Reap. Iza no karazana marina, raha mbola mahay mandanjalanja ianao amin'ny fomba andanianao ny fotoana itiavanao azy.
Ny vanin-taona mafana dia mandeha manomboka ny volana desambra ka hatramin'ny aprily, raha ny maimbo hatramin'ny Mey ka hatramin'ny Novambra dia mitondra toetr'andro mando sy hamandoana be.
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Siem Reap dia amin'ny Desambra sy Janoary, rehefa azo antoka ny masoandro sy maina. Tandremo fotsiny fa ity no vanim-potoana tampon'ny fizahan-tany, ka ho hitanao fa be olona kokoa izy na aiza na aiza ary hiakatra ny vidiny.
Hatraiza ny fahitana ny tora-pasika ao Siem Reap?
Tsy manamorona morontsiraka i Siem Reap. Matetika tsy raharahian'ny tora-pasika Kambodza fa tsy ny Thailand. Fa miadana kosa, azo antoka, ny nosy idyllika ao amin'ny firenena sy ny fasika fotsy mamiratra ao Sihanoukville dia lasa fantatry ny mpitia amoron-dranomasina eran'izao tontolo izao.
Ny halaviran'ny Siem Reap mankany Sihanoukville dia manodidina ny 532km (350 kilaometatra) amin'ny arabe. Izany dia noho io fifindrana lavitra io (10-15 ora an-dalambe) dia maro ireo mpandeha misafidy ny tsy handehanana any Sihanoukville mihitsy. Ny safidy haingana indrindra dia ny maka fiaramanidina, izay mitaky ny 1 ora.
Eo anelanelan'ireo toerana roa malaza any Kambodza, toa ny toerana tsara kokoa handehanany hisotro ronono i Siem Reap. Raha toa ny Phnom Penh dia maneho ny fanovana, ny Siem Reap dia maka ny fototry ny fiarovana. Ny Siem Reap dia mety ho toy ny valan-jaza mihemotra raha ampitahaina amin'ny Phnom Penh raha resaka tombony ara-barotra.
Siem mijinja phnom penh: 143 kilaometatra (231 km)
Rehefa mivoaka avy any Phnom Penh mankany Siem dia manana safidy hafa 4 ianao:
Afaka mandray bus ianao - 6 ora
Mandany fotoana bebe kokoa ary makà taxi - 6 ora
Mamandriha sidina - 50 minitra
Raiso ny ferry izay miampita Tonle Sap Lake- 4 ka hatramin'ny 6 ora
Siem Reap mankany Thailand
Bangkok dia lavitra ny 400 km.
Ny eo anelanelan'ireo tanàna ireo dia manamboatra orinasa mpandeha fiarabe azo itokisana, ary afaka maka ianao:
Fiara fitaterana mivantana avy any Siem Reap mankany Bangkok. (6 mankany 8 ora)
Famandrihana sidina - adiny 1
Siem Reap mankany Vietnam
Ny halaviran'ny dia mankany Saigon mankany Siem Reap dia manodidina ny 600 km amin'ny taniny.
Avy any Ho Chi Minh ianao dia afaka mitety:
Amin'ny bus (12 - 20 ora, miankina amin'ny fijanonana ao Phnom Penh)
Azonao atao ny mametraka sidina mivantana (ora 1)
Siem Reap, trano fandraisam-bahiny
Misy an-jatony maro trano fandraisam-bahiny any Siem Reap. Ny fomba nentim-paharazana na maoderina, ho an'ny teti-bola kely na tsy voafetra, manomboka amin'ny trano fandraisam-bahiny mankany amin'ny hotely 5 kintana, dia hahita fahasambarana daholo ny rehetra.
Seranam-piaramanidina Siem Reap
Siem mijinja ny kaody seranam-piaramanidina: REP
avy amin'ny seranam-piaramanidina mankany Angkor Wat: 17 minitra (5.8 km) tamin'ny alàlan'ny Airport Road
manomboka amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna: 20 - 25 minitra (10 km)
Rehefa mandeha amin'ny halaviran-drivotra 9km miala ny seranam-piaramanidina Siem Reap mankany afovoan-tanàna ianao dia manana safidy 3: